Yakasarudzika yekutenga Bhegi Fekitori, Vagadziri uye Vatengesi - Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd.
Chikopa bhegi bhegi
Canvas bhegi repafudzi
Nylon bhegi repafudzi
Imba >Zvigadzirwa >Yekutenga Bhegi
Canvas bhegi rekufambisa bhegi
Canvas bhegi rekutenga
Beam muromo cosmetic bhegi
Lace kutenga bhegi
Jira rakapetwa jira, rakapfava uye rakareruka, rinopetwa, nyore kugamuchira.
Canvas matatu-epamhepo maruva maruva, mafashoni nyowani, akapfava akapetwa, kutenga zviri nyore kutakura.
Mesh bhegi rekutenga
Maviri-mavara musiyano ruvara mesh yekutenga bhegi ine Ultra-dense uye yakasimba mesh. Mucheka mesh unowedzera kutsva uye wefashoni, uye unouya nehombodo yaamai-mwana kuitira nyore kuchengetedza uye kupeta.
Matipi ekuchengetedza bhegi iwe ausingazive2021/04/30
Zvinonzi mabhegi mudikani wechipiri wemukadzi, saka tinofanira kubata sei "mudiwa" wedu? Mushure mekutenga bhegi, kunyanya mabhegi anodhura ayo anotengwa nemutengo wepamusoro, zvinonyanya kukosha kuti uzive nzira dzakakodzera dzekuchengetedza. Tikasaibata zvakanaka, inokurumidza kuoma nekudonha, uye......
Diki coup rinokudzidzisa iwe kuchengetedza mabhegi kuchengetedza nzvimbo2021/04/30
Maitiro ekuchengetedza mabhegi anogara ari musoro wevakadzi, nekuti mabhegi akasiyana nehembe uye haakwanise kupetwa, saka nzvimbo yakakwana inodiwa kuchengetedza mabhegi. Asi havazi vese vakadzi vanogona kuve newadhiropu yakakura yekuchengetedza mabhegi. Nhasi ini ndichaunza mashoma matipi ekucheng......
Zvakavanzika zvemabhegi evasikana ekuzora2021/04/30
Vasikana vazhinji vanoda kuchengetwa kweganda uye kupfeka vanopfeka vane sarudzo yakaoma nguva dzese dzavanofamba vachienda kure. Ivo vanoda kuunza marudzi ese emabhodhoro nemakani, uye havagone kumirira kuburitsa kabhegi kechikoro kunze.
Vakadzi vanosarudza sei mabhegi?2021/04/30
Varume tarisai pawatch, vakadzi tarisai bhegi! Bhegi rave rinofanirwa kuve-reMM yega yega kupfeka, uye zvakare chiratidzo chekuzivikanwa uye kuravira. Vanhu vane zviuru zvezviso, uye kune zviuru zvemhando dzakasiyana dzemapakeji. Mavara, zvitaera, uye mavara zvinopenya, uye musanganiswa wawo wakanya......
Iwe unogona here kubvunza isu kune chero mibvunzo. Mutengo wedu nebasa zvinokugutsa zvechokwadi.
Kwete 179, Huancheng Street, Shimei Youyi Road, Wanjiang Ruwa, Dongguan City
© copyright 2020-2021 Dongguan Yihua Handbag Co, Ltd.